What is life [ myanmar ] by Ye` Htun Zaw 379 views
ပြောင်းလဲလာတဲ့ စီမံခန့် ခွဲမှုပုံစံသ... by Htet Zan Linn 377 views
Rev.u.thein.nyunt.ph.d.myanmar.cult... by Murann Ezine 489 views
မြန်မာနှင့်ဥဒေါင်း - စောမုံညင်း by san aye 362 views
Return to-where-for-burmese by Zaw Aung 406 views
OnDoctor Free Health Consultation O... by Htet Zan Linn 446 views
ခရစ်ယာန်အသက်တာ အသက်ရှင်ခြင်း သင်ခန်းစာများ
Compiled by Andrew Aung Naing
Je Naw La Dawshi at Kuala Lumpur, Malaysia
1. ခရစ်ယာန်အသက်တာ အသက်ရှင်ခြင်း သင်ခန်းစာများ PracticalChristianLiving - မုရန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ - မြန်မာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမိတ်သဟာရ HCF (Singapore) တွင် - ဆွေးနွေးပို့ချချက်များ - Website: http://murann.com 2014
2. Practical Christian Living Bible Lessons) Course4(၃၅) ၁၉၈့  - The Mailbox Club Course Course 1, 2, 3,4course ၌ Lesson Course4(၂၄) ၌ ( ) (၈) ၂ ၁၄
3. - (၁ ) ၂ ၁၄ Layout - - ELC ၃၄့  - ( )
4. Practical Christian Living Course4၁ ၅ Facts, Faith, and Feelings ၂ ၁၇ How to be sure you are saved! ၃ The Best Choice ၃၂ ၄့  How to overcome feeling of inferiority? ၄၁ ၅ Learning to Accept Myself ၅၁ ၆ ? Why Isn’t Christ Real to Me? ၆၅ ၇့  How To Gain A Clear Conscience? Part 1 ၈ ၈့  How To Gain A Clear Conscience Part2၉၄ ၉ God’s Discipline ၁ ၇ ၁ God’s Authority ၁၂၁
5. ၁၁ God’s Delegated Authority ၁၃၁ ၁၂ God’s Chastening ၁၄၃ ၁၃့  (၁) ၁၅၆ ( ) Understanding Our Deepest Needs Part 1 (Significance) ၁၄့  (၂) ၁၆၈ ( )Understanding Our Deepest Needs Part2(Acceptance) ၁၅ ၁၈ Learning to be Content ၁၆ Dealing with Anger ၁၉၄ ၁၇့  Reaction and Resentment ၂ ၇ ၁၈့  ၂၂၁ Turning from Bitterness to Forgiveness ၁၉ ( ၁) ၂၃၅့  Building Right Relationships (Part 1) ၂၄၉ Making True Friend ၂ ( ၂) ၂၅၆ Building Right Relationships (Part 2) Handling Problems ၂၁ Love One another ၂၆၃ ၂၂့့  Managing Our Finances ၂၇၇ ၂၃ God’s Guidelines for Giving ၂၉၂ ၂၄့  ၃ ၇ The Christian’s Secret ofaHappy Life
6. Facts, Faith, and Feelings Practical Christian Living Course4Lesson 1့့့  ၁၅ ၁၃)့့့့ ၌
7. ၌့  ၌ ၁) ၂) ၃) ၌့့့့့့့့့့့့  ၁) ၂) ၃)့  ၌့့ 
8. -့့့့့့့ 
9.   ့့  ၁၁ ၆့့  ၄့့့့့  ၁၁ ၁့့ 
10.့့့့  ၌့့့့့့  ၌့့့့့့့  ၌ ၌
11. ၌့့့့့  ၄ ၂ -၂၁့့  ၁၁ ၈) ၂ ၂ )
12.့့  D L Moody့့့  ၁ ၁၇ D L Moody့့့့့့့ 
13.့့့့့့့့ ၌့့့  )့  )့့့့့ 
14.့့  ၄့  ၄့့့  ၌ ၁ ၅ ၁ )့့  ၌့့့  ၂ ၁ ၈ ၌့့့့့  ၂၃ ၈ ၄့ 
15.့့့  ၁၅ ၁၃့့့့့့  ၁ ၂ ၃ ၁ ၂ ၃
16.့  ၁ )့  ) )့  ၄ ၂ )့  ၌ )့့ ၌ )့  ၃ ) )
17. ၄ ၌ ) ) ၅ ) ၌ ) ၌ ) ၆ ၌့  ) ) ၇ ) ) ) ၈ ) ) ) ၉
18. ) ) ) ၁ ) )့့့  ၁၅ ၁၃) ကျမ်းချက် အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို စဉ်းစား ဆင် ခင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသော နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
19. How to be sure you are saved! Practical Christian Living Course4Lesson2့ ၌ ၁ ၅ ၁၁-၁၂) ၌့့့ 
20.့့့့့  ၌့့  ၌့့့့  ၄ ၆) ၌ ၈ ၉)့့့့  ၁) ၂) ၃)့့ 
21. ၁့့့ ၌့  ၁၇ ၃ )့့့့့့့  ၁၁၉ ၅၉)့ 
22. ၌့့့  ၂၁ ၂၈)့့  ၂၁ ၃ )့့့  ၌့့့့့့့့့့့့့ 
23.့့့့့့့  ၅၅ ၇)့့့  ၂့့့့့  ၁ ၅ ၁၂)့့  ၁၆ ၃၁)့့  ၌
24. ၂၂ ၃၇- ၃၈) ၁၈ ၁)့့့့့့့  ၁၄ ၂၃) ၃့့့့့့့့့  ၃ ၂့့့ 
25.့့့  ၁ ၁၂)့  ၌ ၌ ၁ ၌့  ၌့့  ၂့  ၌့့ 
26.့  ၌ ၁ ၃ ၁၄) ၃ ၌့့  ၂ ၅ ၁၇) ၄့့  ၌့့့  ၈ ၁၆) ၅ ၌့  ၌့  ၌့ ၌ (၂ ၁၃ ၅) ၌ '' ၌
27. '' ၂ ၂ ၌ ၌ (့  ) ၌့့ )့့့့့့ 
28. -့့့့့့့  ၌ ၌့  )့ ၌
29.့  ၄့  ၁) ၌ ၂) ၃) ၄)့့  ၌ ၅)့့  ၁၃ ၃)့့့့  ၉ ၄၃-၄၈
30. ၌့့  ၌့့့့့့့့  ၆ ၃၇)့့  ၌ - ၂) ၁ ) ) ) ၂ ) )့ 
31. ) ၃ ) )့  ) ၄ ............... ) ) )့  ၅့  ) ) ၆ ) )
32. ၇ ) ) ၈ ) ) ၉ ........ ) ) ) ၁့  ) ) ။့  ၌ ၁ ၅ ၁၁-၁၂) ကျမ်းချက် အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို စဉ်းစားဆင်ချင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသောနည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၌
33. The Best Choice Practical Christian Living Course4Lesson3့  ၁ ၅)့့့့့့  ၃ ၃ ၇ ၉
34.့့့့  ၄ ၇)့့့့့့့့  ၂၃ ၇့့့့့့့ 
35.့့ ၌့့  ၃ ၄ ၅)့့့့့့့့့့  ၌ ၌့  ၁ ၂ ၁၆့့ 
36. -့  ၌့  –့  -့  ၈ ၁၃ -့့့ ၌့့  ၉ ၂၇့့့့့့့့  ၄၂)့့ 
37.့့့့့့့့့  ၅ ၁၅)့့့  ၁့  ၉ ၁ )့့့့့  ၌ ၌ ၂ ၅ ၉ ၂့့့့့့့့့  ၁ ၅
38. ၌့့  ၃ ၅-၆) ၃့့့့့့့  ၁၂ ၂)့့့့  ၈ ၃၂) ၌့ 
39.့့  ၄့့  ၁၃ ၁၇)့့့့့့့့့ 
40. ) ၁-၆ ) ၁ ) ) ၂ ) ) ၃ ) ) ၄့  ) ) ၅ ၄ ) ) ၆ ) ) ၇့  ................................................ )့  ၌ ) ၌့ 
41. ၈ .................... ) )့  ) ၉ .......... )့  ) ၌့  )့ ၌ ၁့့  ) )့့့  ၁ ၅) ၌ ၌
42.့  How to overcome feeling of inferiority? Practical Christian Living Course4Lesson4။ ။ ၌့  (၁ ၆ ၆)့့့့့့့့့  ၄့ 
43. (၁) (၂) (၃)့  (၁) /့့့့့့့့ ၌့့့ 
44. ၁ ၁၆ ၇ (၂)့့့့့့့့့  ၌ ၁ ၁ ၂၆့့့  (၃) - ၌
45.့  ၁၂ ၁၅ ၌့့့့  ၁ ၆ ၉့့့့  ၌့့့  ၁ ၆ ၆-၈ ၌့့့့  ၌ ၂ ၁၁့ 
46.့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့  ၁့့့့  ၌
47.့့့  ၂့့  (့ ) (့ )့့့့့့  ၃့့့့  )့  )့  )့  )့ 
48.့  (့  ) ၌ ၌့  ၌့့ 
49.့့့့့့့  ၁
50. ( ) ( ) ၂ ( ) ( ) ၃ ( ) ( ) ၄ ( ) ( ) ၅ ( ) ( ) ၆ ------------ --------- ( ) ( ) ( ) ၇ -------------------------------------------- ( ) ၌ ( ) ၌ ( ) ၌့ 
51. ၈ ------------------------ ( ) ၄့  ( ) ၌ ၌ ၉ - ( ) ( ) ( )့  (ဃ) ၁ ( ) ( ) ။ ၌့  (၁ ၆ ၆) ကျမ်းချက် အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို စဉ်းစား ဆင်ချင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသော နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၌
52. Learning to Accept Myself Practical Christian Living Lesson Course4Lesson5့ .... ၁၃၉ ၁၄့့့  self-image self-image့့့  self-image့့  ၌ self-image့ 
53.့  self-image )့  self-image့့့့့့့့  self-image့့့  (၃)့့့့့့့့့  (၁)့့ 
54. ၁ ၆ (၂)့့့  ( ၁ ၂၇) (၃)့  ၄၃ ၇့့  ၌
55. (၄)့့့့့့့  ၌ (၁ ၄ ၇)့့့့့့့  ( ၁၇ ၅)့ 
56. self-image self-image့့  (၁)့့  ၌ (့ )့  ၁၃၉ ၁၄့့့  ၌့့့ 
57. (၂)့့့  ၌့့့  ၁ ၃့့့့့  (၃) ၌့ ၌ ၌့့ 
58.့့့့  ၌့့့  (့ )့့့့  ၂ ၁ ၁၂ (၄)့့့  ၌့့  (့ )့ ၌့့့  ၌့့့့  ?့  Kandura
59.့့့့့့့  ...့  (၅)့  ( ၂ ၁ )့့့့့့့့့  ၈ ၂၉့့  ၌
60.့့့  ၌့့့  (၆)့့့့့့့့့့့့့့့  ----့  (၇) ၌့့့့ 
61.့  Fannie Crosby ၆-့့့့့့  ၌ Fannie Crosby (၈) ၌
62. Fannie Crosby (၆ ) To God Be the Glory All the Way My Savoir Leads Me Blessed Assurance့  Fannie Crosby့့့့့့  ?့့  ? self-image self-image့့ 
63.့့့  ၈ ၂၈့့့့့့့့့့့့့့့ 
64. ၁့  ( ) ( )့  self-image ( )့  ၂့  ( ) ( ) ၃့  --- ( )့  ( ) ၄့  ( ) ( ) ( ) ၅ ? ( ) ( ) ၆ ? ( ) ( )
65. ၇ ( )့  ( ) ( ) / ၈့  ( ) ( ) ၉့့  ( ) ( ) ၁့့  ( ) ( )
66. ? Why Isn’t Christ Real to Me? Practical Christian Living Course4Lesson6့ ၁၆ ၁၄ ၌့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ 
67.့့  ၌့့့့့့ ၌့့့့့  )့  ၌ ၌့  ၌ ၌ ၌့  ၌့့  ?့့  ၌့့့့့့့့ 
68.့့  ?့့့့  ၌ ၈ ၉ )့့့့့့့့့့့့့့့ 
69.့့့့့့့့့  ?့  ၄့့့  ၁)့့့့့့့့့့  ၆၆ ၁၈)့့့့့့့  ၌့့ )့့့့့့ 
70. ၂)့့  ၌့့့  ၌ ၌့့့့့့  ?့  ?့  Worldly System)့ 
71. ၌့  Worldly System)့့့့့့  ၌့့့့့့့့့့့ )့့  ၄ ၄့  ၌့့့့့့့  ၄ ၃ )့့့့ 
72.့့့့  ၅၉ ၁-၂)့  ၌့  ၌့့့့့့့့့  ၌့့့့့့့့ 
73. )့့့  ၌့့ ၌့့့့့့  ၁၃၉ ၂၃-၂၄)့့့့ 
74.့့့့့  ?့့့့  ၄ ၄ ၁ ၁ ၉့့့  ?့့့့့ 
75.့့့့  ၌့့့့  )့့  ၌့့  ၌ ၌့ 
76.့့့့့့့့  ၃ ၁၉) ၌့့့  ၁၁၉ ၅၉့့  ၌့့့့  ?့  ၌
77.့  (၁ ၂ ၃)့  ၁) ၌ ၌့့့့  ၌့့့့့  ၆ ၃၃) ၂) ၌့့့  ၂၂ ၃၇
78. ၃)့့့ )့့  ၄)့့့့့့့့့့့့  ၁ ၃၅)
79.့့့  Ro ert Murray Mc Cheyne့့့့့့့့့့့  ၁၄ ၂၁)့့့့  ၌ ၁့့  ? ) ၌့  )့  ၂့  ?
80. ) ) ၃ ? ) ) ၄ ? ) ) ၅ ? ) ) ၆ ? ) ) ၇့့့  ) ) ၈့့  ) ) ၉ - )့  )့့  ၁ ?
81.့  How To Gain A Clear Conscience? Part 1 Practical Christian Living Course4Lesson7့ ၌ ၂၄ ၁၆ ၌့  ?့့့  ၌ ၂၄ ၁၆ ၂)
82. ၁)့့့  ၂)့့့့့့့  ၌့့့  ၌့့ 
83. trespass)့ )့့့့့့  ၆့  ၁)့  ၂) ၃) ၄) ၅) ၆) -့  ၂့့  ၂)
84. ၁)့့  ၂)့  ၌့့  ၌့  ၅ ၂၃-၂၄့့့့  ?့့့ 
85.့့့့့့့့့  ၌့  ၁၃၉ ၂၃-၂၄)့့့့့့  ၁) ? ၂) ? ၃)့  ? ၄) ? ၅) ? ၆) ? ၇) ?
86. ၈) ? ၌့့့့့  ၁)့့့့့့့့့့့့့ 
87. ၁ ၂ ၃့  ၂)့့့့့့့့့့့့့့ 
88.့့့့့  ၃)့့့့  ?့့့ 
89.့့  ၌့့  ?့  ၁)့  ၂)့  ၃)့့့့  ) ?့့့့  ၁ ) ၉ )့့့့့့ 
90.့  ၌့့့  ၄)့  ?့့့့့့ )့့ 
91. ၅)့့့့  ၌့့့့့့့ )့့့့့  ၌့့  ?
92.့့  ? ၌့့့့့့့့့  ၁၃ ၁၇)့  -၁့့  -၂့့  ၌့့့ 
93.့့  ၁) ) )့  )့  ၂) ? -့့  - ၃-၅) ၃)့  ၄)့  ) ) ၅)့  ) ) ၆)့  ?
94. ) ) ? )့  ၇)့့  ) ) ) ၈) ) ) ၉)့့  ) ) ၁ )့့့  ) )
95.့  How To Gain A Clear Conscience Part2Practical Christian Living Course4Lesson 8့့့  ၌ ၂၃ ၁) ့့့  ့့့  ၌့့့့  ၁ ၃ ၂၁-၂၂) ့့့့ 
96. ့့့့့  ့  ့  ၌့့့့့့  ?့့့  ၌့့့့့့ 
97.့့့့့့့့့့  ၌့့  - - -့့့  ၃ ၈ ၁၃့  ?့့့ 
98.့့  ၌ ၂) ၁) ၂)့့့့့  ၌့  ?့့့့့့  ၌့့့  ?့့့့့ 
99.့့့့့့့့့့  ၌့့  ၌့့  ၁ ၁ ၇ ၌့့့့  ၌့့့့့့့  ၌့့့့  ၌
100. ၌့့့့့့့  ၌ ၌့့့့့့့့့့ ) ၄့  ၁) ၂)့  ၂)့့  ၂)
101. ၁)့့့  )့  ၁၄ ၂၃့့့့့့့့့့  ၂)
102.့့့ ) ၌့  ၌့့့  ၌့့့  ၁ ၁၅ ၂၂့့  ၌့့့့့့ 
103.့့့့့့့  ့့့့  ့့့့့့  ၌့  ့့့့့့့့ 
104.့့့့  ၄ ၄ ၁ ၁ ၇ ၉)့  ၌့  ၌့့  ၄ ၇)့့့့့့့့့့့  ၃ ၁၂-၁၃ ၌ van Ro erts
105.့့  ၃ ၂)့  ၌့  ?့့  ) ?့့့့့့့့့့့့့  ၌ ၌့့့ 
106. ၁)့  ) )့့  )့့  ၂)့့  ) ) ) ၃) ) ) ၄)့  ) ) ၅) ) )
107. ၆)့  ၂-့့  ၂)့  ) ) ၇) ) ) ၈)့  ) ) ၉)့့  )့့  )့  )့့  ၁ )့  ? ) )
108. God’s Discipline Practical Christian Living Course4Lesson9၉၄ ၁၃) ၌့့  ၌့့  ၌ ၌့့  ၇၃့ 
109.့  ၇၃ ၃-၇)့့့့့့့  ၌့  ၇၃ ၁၈-၁၉့  ၌ ၌့့့့့ ၌့  ၌့့  ၌့ 
110.့့့့့့့့့့့့့့့့  ၌့့့ 
111.့့့့့့့့  ၇) ၇) ၇) ၇)့ 
112. ၇) ၂ )့့  ၁ )့့့့့့့့့့့ 
113.့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ ၌့့့့့့့့့့ 
114.့ )့  ၌ ၌့့  ၁၃ ၂၄)့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ 
115. ၅)့့့  ၃)့့့့့့  ၌ ၌့့့့့့  ၁၂ ၇-၈့ 
116.့့့့့ )့  ၁၂ ၆့့့့့  ၉၁ ၁၃့့  ? ၌ ၌့့  ၂) ၁)့့့့ 
117. ?့့့ )့့့့့  ၌့ ၌့ ၌့  ၌့ ၌့ )့့့့့  ? ?့့့့  ၂)့ 
118.့ )့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့  ၁၂ ၁၁)့့့ 
119.့့  ၄ ၄ ( ၁၁၉ ၇၅)့့့့့့့့့့့့့့  ၁၂ ၁၂-၁၃ ?့့့့့ 
120. ၁) ? ) ) ၂)့  ၇ ? )့  )့ ၌ )့  ၃) . )့  ) ) ၄)့့  ? ) ) ၅) )့  )့့  )့ 
121. ၆)့  - ) ) )့့့  ၇) ) ) )့  ၈) ) ) ၉) ၌ ၌ ) ) ၁ )့့  ) )
122. God’s Authority Practical Christian Living Course4Lesson 10့့့ ၌့  ၄ ၁၁ ၌ ၌ ၌့့့့့့  ၄ ၁၁
123. - ၌့့့့့့့့  ၁၄ ၁၃-၁၄့့့့ )့့ 
124.့့့  -့့့့့့့့  ၌့့ 
125. ၌့့  ၅၃ ၆့့့့့့  ၉ ၆ ၌့့့  ၁၈ ၁၉
126.့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့  ၆ ၃၈
127.့  ၌့့့့့့  ၌ ၂ ၆-၇့  ?့့  ၈ ၂၉) ၌ ၌့့့  ၂၆ ၃၉့  ၌့  ၌
128. ၌့  ၂ ၈့့့့့  ၂ ၉ ၌့့  ၁) ) ၂) )့  ၁) )့ ၌ ၂ ၂)့့  ၌့  ၂့့ 
129. ( ၂ ၂)့  ၌့့့့့့့  ၌့ ၌့့့့့့့့  ၇ ၂၁) ၂) )့  ၌့့့  ၌့့  ၌့ ၌ ၂ ၁၃ ၅)့  ၌
130.့့့  ၌့့  ၌့ ၌ ၂ ၅့  ) ၁) ၂)့  ၃)့  ၄)့  ၅)့့  ၆)့  ၇) ၈) ၂)့  ၉)့  ၁ )
131. God’s Delegated Authority Practical Christian Living Course4Lesson 11့  ၁၃ ၁) ၌့့့့့့ 
132. ၁)့့့့  ၂)့့့့  ၄)့  ၄) ၁) ၂) ၃) ၄) ၄-့ 
133. ၁) - ၌့့  ၅ ၂၂့  ၌ ၃ ၂ ) ၌ ၌ ၌့့  ၆ ၁ ၌့့့့့့့့့့ 
134.့့့  ၌့့့  ၅ ၂၅့  ( ၆ ၄) ၂)့့့့့့  ၌့့့့့  ၌့  ၂ ၂ ၂့့့့ 
135.့  ၁၃ ၁့့့့့  ၁ ၂ ၁၃့့့့့  ၂၂ ၂၁ ၃) ၌့့ 
136.့့့့့  ၁၃ ၁၇) ၌့့့့့  ၁ ၅ ၂-၃ ၄)့့ ) ) ၌့့့  ၌့့့့့့  ၌
137. ၌ ၃ ၂၂)့့့့့  ၁ ၂ ၁၈့့့့့့့့ ၌့့့့့့  ? Bill Gothard)့့့့့ ၌့ 
138. ၃ ၂၃-၂၄) ) ၌့့့့့  ၌ ၄ ၄ ၆ ၉့  ၁)့  ၌ ၁ ) ၁) ၌ ၂ ၁၂)့့့ 
139.့့့  ၌့  ၂)့  ? ၌ ၌့  ၃)့့့  ?့့့့  ၌
140.့့  )့့့့  ၄)့့့့  ၌ ၌့့့့့့  ၅ ၂၉)့့့့့့့့့  ၌့့  ၌ )
141.့  ၁ ၂ ၁၉့့့့့့  ၌့့့့့  ၁၃ ၁-၂)့့့့့့  ?့့ 
142. ၌့့့  ၄ ၄ ၃ ၁)့့  ) ၁ ) ) ၂့ )့  ( ) ) ၃ ၌ ) ) ၄ ) )
143. ၅ ) ) ၆့့့့  ) ) ၇့့  ) ) ၈့  ၌့  ၁ ၂ ၂)့့့  ) ) ၉ ၌ ) ) ၁ ၌့  ) )
144. God’s Chastening Practical Christian Living Course4Lesson 12 ၆ ၇့  ၌့့့့  ၁ ၂ ၁့့့  ၌ ) ? ၆) ၄့့့့့့့ 
145. ၆ ၇)့့့့့့့့့့့့့့့့  ၂) ၁)့့  ၂)့့့  ၁ ၂ ၌ ၌ ၌
146.့့့့့့ ၌ ၌့့့့့့  ၅၁့  ၅၁ ၁-၃
147.့့့့့့့့့  ၂ ၁၁့့့့့  ၌့့  ၌့့့့့့့့့  ?့  ?
148.့့့့့့့  ၁) ) )့့့့့့့ ၌့ ၌့့ ၌ ၁ ၃ ၁ -၁၁့  ၌ ၌့  )့့့ 
149.့့့  ၃) ၂)့့့့့့့့့့့့့့့့ 
150. ၌့့့့့့့့  ၌့့့့ ၌ ၁ ၁ ၁၁့့့  ၈ ၁၃)့့့့့့့့့့့့ 
151.့့့့့့့့့့့့  ၁ ၁၁ ၃၁့့့့  ၁ ၁၁ ၃၂့့  ?့့့ )့့့့့့့  ၁၂ ၆
152. …့့  ၌ ၄့  ၃)့  ၁)့့့့့့့့့  ၁၁၉ ၆၇့့့့့့့့့ 
153.့့  ၁၂ ၉့့့  ၂)့့့့့့့့့့့့့့့့့  ၁၂ ၁့့့့  ?့  ၃)့့့  ၁၁
154.့  ၌့  ၌ Hall of ame)့့  ၄)့့့့့့့့့့့့့့  ၌့့ 
155.့့့့့့့့  )့့့့့့့့့  ၉ ၁့့့့့့့့့့့ 
156. ( ) ၁့  ၂့  ၃့့့  ၄ ၅့  ၆ ၇့့  ၈ ၉့  ၁့ 
157.့  ၁) ) Understanding Our Deepest Needs Part 1 (Significance) Practical Christian Living Course4Lesson 13့  ၁ ၂ ၁၇)့့့့့့့့  ၂)
158. ၁) ၂)့့့့့့့့့့့  ၌့့့့့့့ 
159.့့့့့့့့့  ၅၃ ၆့့့့့့့့့ 
160.့့့့့့  ၂ ၁၁ ၁၇)့့့့့့့့့  ၌ ၁၂ ၁၅့့့့့့့့ 
161.့့့့  ၁)့့  ၂) ၌့့  )့  ၄ ၁၆ ၃)
162.့့့့  ၁ ၁၂ ၇ ၄)့  ၌့  ၌့့  ၌့့့့့့့  The Mail o Clu Lessons့့့  ၌့့့့ 
163.့့  ၌့  ၁၂ ၁့့့့့့့  )့့့  ? ၌့့့့ 
164.့့့့့့့့့့  ၁၂ ၁-၂)့့့့့  The Christian’s Secret ofaHappy Life Mrs Hannah Whitall Smith့့့့့့့့့့့့့့ 
165.့့့့့့့့့့့့့့့့့့  Mrs Hannah Whitall Smith The Christian’s Secret ofaHappy Life )့  ?့ 
166.့ )့့့့့  ၄၅ ၅ ၌ ၌့့့  ၌့့့  ၁ ၂ ၁၇
167.့့့့  ၌့  ၌့  ( ) ၁
168. ၂့့့  ၃ ၄့  ၅့  ၌ ၆့့  ၇ ၈ ၉ ၁့ 
169.့  ၂) ) Understanding Our Deepest Needs Part2(Acceptance) Practical Christian Living Course4Lesson 14့့  ၈ ၃၈-၃၉ ၌့့့့ 
170.့့့့့့့့့့့့့့့  ?့့့  ၌ ၁ ၁ ၃့  ၌့့ ၌့့  ၁ ၆
171.့  ?့  ?့့့့  ၌့့့  ၌့့  ၌့  ) ၁ ၁၄)့့့့့  ၌ ၁ ၁ ၈့့့့့့  ၌ ၌့့့  ၌
172. ၌ rofessional mothers့့  Basic rinciples of Bi lical Counseling y La rence Cra r )့့့  ၌ ၃)့့့့့့့  ၌့ 
173.့့့့့့့  Conditional Love)့    ့့ 
174.့  ?့့  )့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ 
175.့  ၌့့  ၁၆ ၃၃)့့့  ?့့့့့့့  ၌့့့့  ၁)့့့့့့့့့့့့့့  ၉၁ ၁၄-၁၆
176. ၂)့့့့  ၌့့့  ၁၄ ၂၁ ၃)့  ၌့့့  ၌ ၌့့  ၌့့့  ၌့  ၌့့့့  ၄ ၃ ၁၇- ၁၉့့့့ 
177.့့့့့့့့  ၌့  ၌့့့့့့့  ၅ ၈ ၌့့  ၌့့့  ၈ ၃၂-၃၃
178.့့  ၌ ၌့့့  ၈ ၃၈-၃၉)့  ၌့့ 
179.့့့့  ၌့့့့ ၌ ၌့  ၌့့့  ၁၇ ၂၃့့့့့့့့  ၌ ၌ ၌ ၁ ၄ ၁၆့  ၌
180. ) ၁)့  ၂) (Standing) ? ၃)့  State) ? ၄) ? ၅) nconditional Love) ၆)့့  ? ၇) ၌ ၌့  ? ၈) ၉)့့  ၁ )့ 
181. Learning to be Content Practical Christian Living Courses4Lesson 15 ၌့့  ၄ ၁၉့့့့  ၌့  ?့့့့့ 
182.့  ၌့့  ၄ ၁၉ ၁)့  ၅့့့့့့့့  ၌့့  ၆ ၂၅ ၃၂-၃၃ ၂)့  ၌့့့  ၌့  ၌့့့  ၌ ၃၁ ၃
183. ၃)့  ၌့့့  ၌့့  ၌့ ၌့့့  ၁ ၃-၄) ၄)့့့့့့့့့့  ၈ ၃၂့့  A W To er့့  ?့ 
184. (A.W.Tozer. The Knowledge of The Holy)့့့ ၌့့  ၁ ၅ ၈)့့့ ) ၌့့့့့  ၌့့့့့  ၌့့့ 
185.့့့့့့  ၌့့့့့့့့့့ 
186.့့့့့့့  ၌့့့  ၌့့  ၌့့  ၌ ၌့့့့ )့့့့့့့့့့့့ 
187.့့့့့့့့ 
188.့့့့့့့့့  ၁)့့့့့့့  -့့့့့့့ )့  ၁၁ ၆ ၂)့့ 
189.့့့့့့့့့့့  ၄၁ ၁ ၃)့့့့ ၌့့  ၂၃ ၁ ၄)့့့ ၌
190.့့့့့့  ၄့့  ၁၃ ၃၈-၃၉့့့  ၌့  ၈ ၁့  ၌ ၅) ၌့့့့့ 
191.့့့့့့့့့့့့့့့့ 
192.့့့့့့့ ၌့  ၄ ၁၁့့့့  ၄ ၄့့  ၌ ၄ ၁၂့  ?့့့့ 
193.့့့့  ၌့  ၁၃ ၅့့  - ၁)့  ၌ ၂)့့့့့့  ၁)့့  ၂) ၃)့ )့့  ၄)့့့ 
194. ၅)့့  ၆) ၇)့  ၈) ၌့  ၉)့  ၁ )့့  ၌့့့ 
195. Dealing with Anger Practical Christian Living Course4Lesson 16့့့  ၄ ၁ ၁၉-၂ )့့့့့့့့့့့ 
196.့့့့့  ၌့  ၌့့့  ၌့့  ၌့့့  ၄ ၂၆
197.့့့့့့ )့့့့့့့့့  ၁)့့့့့  ၌ ၇ ၉ ၂)့့့့ 
198. ၌့  ၌့့့့  ၃)့့့့့့့့့့  ၌့့့့့့့့့ 
199.့့့့့့့့့  ?့့့  ? SELF ) SELF ( )့  ၌ S L )့့  SEL
200. )့  S L )့့့့ )့့့့  ၌ ) -့  )့့  ? S L )့  ၌့့့့့့့ )့့  S L )့့  S L )့့့ 
201.့့့့့  self) S L ) self)့  self- life)့  ?့့့  ၌့့  ၌ ?့ 
202.့  ၌့့  ၆ ၆ ၂) ၁)့  ၂)့့ ၌့့  ၃)့  ၌့့့့့့့့  ၌့  ၌့  ၆ ၂့့့  S L )့့့့့  ၁)့့့့ 
203.့့့့့့  ၅ ၁၉-၂၁ )့့  ၄့့  ၄ ၃၁့  ၄့  ၂)့့့့့့့ 
204.့့့  ၃)့့့့့့  ၌ ၄့  ၄ ၆ ၁၁)့့့့  ) ၌ ၌ ၌ ၄)့  SELF )့့  ၌ S L )
205.့ )့  ၌ ၌ ၌့့့  ၌့့  ၉ ၂၃့့့့့့  ၌့့့ 
206.့့့့ ) ၌့့့့့  ၌
207. ) ၁)့  ၂) ၃) ၄) ၅) ၆)့  ၇)့  ? ၈) ? ၉)့့ ) ? ၁ ) ၂) ၁)့  ၂)့ 
208.့  Reaction and Resentment Practical Christian Living Course4Lesson 17့ ၌့  ၁၁၉ ၁၆၅့့့့့့့့့့့့့့့့့့့  ?့့့့့့့့့့့ 
209. ၌့့့  ၃ ) ၌့့့့့့့့့့့  ? ၃ )့  ၃ ) ?့့့့့  ၁၂)့့့့့့့့ 
210.့့့  ၌့့့  ၇)့့့့့့့့့့့့ 
211.့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ 
212. ၁)့ )့့့့့့့့  ၌့့့့့  (၂)့့့့့့့့  )့ ) ၌့  ၂)
213.့  ၃)့့  ? ၄)့့့့့့့့့့့့့  ၌့့ 
214.့့့့  ၆ ၁၄-၁၅ ၌ glethorpe ohn Wesley့  John Wesley့  ၅)့့့့့့့့့့့့့့့့့့  ၁၅ ၁
215. ၆)့့့  ၇)့့့  ၌့့့  University of din urgh Stuart Blac ie့့့  ?
216.့့့့့့့့့့့့့့့ )့့့့့့့့့့  ့့ 
217.့  ၌့့  )့ ၌့  ၁၁၉ ၁၆၅့  ၁၉ ၁၁ ့့့့့့့့  ၌့့့့ 
218.့့့့့  ့  ၌့့့့့့့့့  ၄ ၂၆-၂၇ ၌ ့့့ 
219.့့့  ၅ ၄၄့့့့့့့့့  ၌့့့့့့့့့့့့့့  ၌့့ ၌၄့ ၌၄ ၁ ၅ ၁၅့့့  ၌့့့  ၌ ၁ ၂ ၂၁-၂၃့့့ 
220.့့့့  Miss Amy Carmichael့့့့့့့  ၌့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့  ( ) ၁)့့့့့  ၂)့့့ 
221. ၃)့့  ၄)့့့့  ၅)့့့့  ၆)့့့  ၇)့့  ၈)့့့  ၉)့့  ၁ )့ 
222.့  Turning from Bitterness to Forgiveness Practical Christian Living Course4Lesson 18့့  ၄့့့  ၄ ၃၁-၃၂) ၌့့့့့့့ )့့့့့့့့ 
223.့့့့့့့့့့့့့့့့့့ 
224.့့့့  ၌့့  ၌့့့  ၁)့့့့့့ 
225. ၂)့့့့့  ၃)့့့့့့့့့ ၌့့့့့့့့့့ 
226. ၁)့့့့  ၉ )့့့  ၌ ၌ ၌ ၌ ၌့  (S.I. McMillen, None of These Diseases) ၂)့  ၌့့ ၌့ )
227.့  ၃)့့  act)့့  ၂ )့့  (Bill Gothard) ၄)့့့့့့့့့ 
228.့့့့ )့့ )့ )့့  ၌့ )့့့့့  ၁)
229.့့့့့့့  ၁၂ ၁၉)့့့  ၂)့ ၌ ၌့ ၌ ၌ ၃)့့့့့့့့ 
230.့  ၈ ၁၃)့  ၌့ ၌့့ ၌့့  ၌့  ၄)့  ၌့့့့့့့့့့့့ 
231.့့  ၌့့့့့့့့့့့့့့့့့့  ၌့့  ၃ ၁၂-၁၃)
232. ၅)့့့့့့့့့့့  ၌့့့့  Clara Barton့  Miss Burton့ 
233.့  ၌့့့့့့့့့့့့  ၌့့့့့့ 
234.့့့့့့့  ၈ ၂၈့့ )့့့့့့့့ )့့့့့့့့့့့့့့့ 
235.့့့  ) ၁ ၂့  ၃့  ၄့့  ၅့့့ ) ၆့့  ၇့ ) ၈ ၉့့  ၁့ 
236. ၁)့  Building Right Relationships (Part 1) Making True Friend Practical Christian Living Course4Lesson 19့့  ၁၃ ၂ ) ၌့့  ) ၂ ၁၈)့့  Social eings)့့့ 
237.့့  ၁) ၂) ၃) ၄)့့့့့့့့့့့့့့့့ )့့  ၁၃ ၂ )့့့့ 
238.့့  ၁)့  ၌့့့့့  ၁ ၁၅ ၃၃)့့့  Charles H Spurgeon့့့့  Spurgeon့့့့  Spurgeon
239. Spurgeon့့  ၌့  ၂)့  ool)့့  Scoffers)့့့့  ၌ ၁ ၁)့့့  sinners)့  ၌့  ၃)့့ 
240.့့  )့့  ၂ ၁၉) -့့  -့့့့  ၂၂ ၂၄-၂၅)့့့့့့့ 
241.့့့့  )့့  ၁ ၁ )့  ၂) ၌့့  )့  o than you)့  )့့  Tom့့့ ၌့့  Tom့့့့ 
242.့  Tom့  Tom Tom့့့  Tom့့  Tom ၌့့  Tom့့့  (Joyce Dix)့့့့ 
243.့့့့့့့့  ၌့့  )့့့့့့့့့့့့့့  ၁၁၉ ၆၃)့့့့့ 
244.့  (William Glasser )့့့  ၌့  ၌့့  ၆ ၂)့  ၌့့  ?့့့ 
245. ၂၇ ၆)့့့့  ၌့့  ၁)့့  ၌ ၌
246.့  ၂)့့့  ၄)့့့  (၅)့  ၁၈ ၂၄) ၆)့့  ၌့့  ၌
247.့့့့့  ၇)့့့  ၌ ၌ ၇ ၁၂)့့့့့့့့့ 
248.့့့့  ၁၈ ၂၄)့့့့့  ၂ ၃ ၁၈)့့့့့  ) ၁့့့  ၂့့့ 
249. ၃ ၌ ၄ ၅့့  ၆့  ၇ ၁ ၁ ၈ ၉့  ၁ ၌့့့့  ၌့ 
250. ၂) Building Right Relationships (Part 2) Handling Problems Practical Christian Living Course4Lesson 20့့  ၁၅ ၇)့့့့့့့့့  ၁)့ 
251.့့့ )့့့့့့့့  ၃ ၁၄-၁၅)့့့  ၄ ၄့  ၃ ၁၇) ၂)့့့့ 
252. ၃ ၆-၈)့့့့  ၁၄၁ ၃) ၃)့့  ၄)့့  ၌့ 
253.့့့  ၌့့  ၂) ၁)့  ၂)့့့  ၁)့့့  ၌့  ၅ ၂၃-၂၄)့  .. ၁)့  ၂)့  ၃)
254. ၂)့့့့  ၁၈ ၁၅)့့့့့့့့့့့့့့့ ၌ - ၌့့့့ 
255.့့့  ၁၇ ၃ ၁၈ ၂၁-၂၂)့့  ၄၉ )့့့့့့  ၅ ၁၈ ၁၇့့ 
256.့့့  )့့့့့့  ၌့့့့့ 
257.့  ၌့့့  ၂ ၁၄-၁၆)့့  ၌့  ၌့့့  ၌့  ၌ -့  ၌့  ၂) ၁)့  ၂)့ 
258. -့့့့ )့့  ၁၅ ၇)့့့  ၌့့့့  ၌့့့့့့့့့့ 
259.့့့ ၌့  ၁၅)့  ၆ )့  ၌့့့့့့့့့့့့့ 
260.့့့  ၌့့့့  ၌့့ 
261.့့့့့့့့့  ၂- ၌့့ ၌ Channel)့့  (Will Longenecker)့ 
262.့ )့ )့့့  ၌ ) ၁့့  ၂ ၃့့့  ၄့ 
263. ၅့့  ၆ ၇့့  ၈ ၌ ၉ ၌ ၁ ၌့့ 
264. Love One another Practical Christian Living Course4Lesson 21့့့့့့  ၁၃ ၃၄-၃၅) ၌့့့့့  ၁၃ ၃၄)့  ၌့  ၄့့့့  ၁၅ ၁၂) ၅ ၁၄)့့  ၁ ၃ ၁၁)့  ၌ ၁ ၄ ၂၁
265.့  (၁ ၄ ၁၈)့့့့့့့  ၁၃ ၃၅)့  ့  ၁)့့့့့့့  ၁၅ ၁၇ ၂)့့့့  ၁ ၃ ၁၄
266. ၁) (EROS) R S ၂) (PHILIA) HILIA့  ၃) (AGAPE) AGA AGA )့  )့့့့  ) ၃ ၁၆့့ ၌့့  )
267.့့့့့့့့  ၅ ၈့့့  ၌ )့့  ၁ ၁၃)့့ ၌ ၌ ၁ ၁၃ ၄-၇ ၁ ၁၃
268. ing ames ersion့့ ၌့့့့  ၌့  ၌့  ၌ ၌့့့့့့့့  ၅ ၅)့့ )့့  ၅ ၂၂့  (Channel)့့ 
269.့့  ၌့့့့့  ၌့့့့့့့့့  ၌့  ၁ ၃ ၁၄-၁၅့ )့ )့့  ?
270. ၁ ၌ ၌ )့့  ၂ ၌ ) ၌့့့့  ၌့  ၆ ၁-၂ ၌ ၌ ၌့့ 
271.့  ၌ ၌ ၌့  ၃)့့့့့  ?့့  ၌့့့့့့့့့့့  ၅ ၄၃-၄၄
272. ၄) ၇့ )့့့  ၌့့့  ၌့့့့့့့  ၌ ၂၂ ၂၈ ၅) ၌ ၌့ 
273. ၌ ၆) ၌့့့့့့  ၇)့့့့့  ၌့့့ 
274. ၈)့့့့့့့့  ၌့  ) C S Le is့့့့့့့့  C S Lewis. Mere Christianity)့့  ၌
275.့့ ၌့့့့  ၌့့့့့့့့့့့့့့  ၌့့ 
276.့့့  ၌့့့့့့့့့့  ၌ ) ၁့့့  ၂
277. ၃့့  ၌့  ၄ ၅့  ၆ ၇ ၈့့့့ ) ? ၉့့  ၁
278.့့  Managing Our Finances Practical Christian Living Course4Lesson 22 ၆ ၃၃)့့့  ၃)့့့  ၃)့  ၁ ၌့့့  ၂၄ ၁)
279.့  ၂ ၈)့့  ၅ ၁ ၁၂) ၌့  ၁ ၂၉ ၁၁) ၂့့့့့့  ၁ ၂၉ ၁၂)့့  ၌ ၈ ၁၇) ၈ ၁၈) ၃့့ 
280.့့့့့့  ၌ ၁ ၃)့့့့့  ၁ ၆ ၁၉-၂ )့့့့  ၆ ၂၉ ၁၄)့့့  ၄့့့့့့ 
281. ၁၃ ၈)့့့့  ၌ ၂၂ ၇)့့့့့့့  ၁ ၆ ၁ )့့  ၂၈ ၂၂)့့ 
282. ၌ ၅ ၁၃) ၌့  ၌့့့  ၆ ၁၉-၂၁)့့့  ၌့့  ၄့  ၁၆ ၁၃)့့့့့့့  ၌ ၁ ၆ ၉)့  ၌
283.့  ၁ ၆ ၁၇) ၁၉၂၁့  ၉)့  Edgewater့့  Wall Street့  ၌eor့့  ၂၅့  Ivar rueger Wall Street essie Livermore Charles SchaSamuel Insull့  Ho ard Hopson Arthur Cotton ၌eor Richard Whitney့  Sing Sing့  Leon raser့  Al ert all
284. ၌့့့့့့့့  ၁ ၆ ၁၇)့့  ၂၅ ၁၄-၃ )့့့့့့့့့ 
285.့  -့့့့့့့့့့ )့့့့့့ )့ 
286.့  ၌့  ၌့့ ၌ ) ၄ ၄ ၁၁-၁၂) ၆)့့့့့ 
287.့့့  ၂၂ ၂၆) ၌့့့့  Bill့့့့  ၌့့့ 
288. ၁) Bill့့  ၂) Budget့့့့  ၌့  Bill့  Bill့ 
289.့့  ၄) ၅)့့့ 
290.့့  ၌့့  ၌့  ၁၂ ၁၅)့့့့  ၆ ၃၃)့့့  ၁ ၂ ၃ ၄့့့  ၁)့့  ၂)
291. ၃)့  ၄)့  ၅)့့့့့့့့ ၌ ၌့့့  ၁ ၆ ၆)့့  ၌ ) ၁) ၂)့့  ၌
292. ၃)့့  ၄) ၌ ၅) ၆)့့  ၇)့  ၈)့့့့  ၉) ၁ )
293. God’s Guidelines for Giving Practical Christian Living Course4Lesson 23့  ၌ ၂ ၉ ၉) ၌ ၃) ၁) ၂) ၃)့့့့ )့့့့့့့့့့့့  ၌့  ၌့ 
294.့့့့  Tithe)့့့့့့  ၌့့့့့့့ )့့့့  ၂၇ ၃့့့့့့့့့့့့့  ၁၆ ၁၆-၁၇့့့့့့့  ၃ ၉-၁့့ 
295.့့့့့့့  ၄ ၄ ၃ ၁ )့့့့့့  ၌ ၆ ၃၈) ၌့့့့့့့့့့့့  ၆ ၃၈ )့့့ 
296.့့့့  ၅ ၁၂)့့့့့့့  ၌့့့့့့  ၌ ၁)့့့  )့  ၌၄့ ၌၄့့  ၂ ၈ ၅)
297. ၂) ၌့့့့့  ၌့့့့  ၁ ၁၆ ၂)့့့့့့  ၌ R G LeTourneau)့့  Mr R G LeTourneau ၃)့့  ၌့့  ၌့့ 
298. ၁ ၁၆ ၂) ၌့့  ၁ ၁၆ ၂) ၄)့့့  ၂ ၉ ၇) ၅)့့့  ၌့ )့့  ၌့့  ၌့့့့  ၌့့ 
299.့ ၌့့့  ၌ ၌့့့့့့  ၌ )့့့့့  ၁၂ ၄၃-၄၄)့့  ၁)့့့့့့ 
300.့့  ၁ ၉ ၁၄) ၂)့့့့့  ၆ ၆) ၃)့  )့့  ၌့  ၁ ၃ ၁၇)့့့  Simplicity) ၁၂ ၈) ၄)့ 
301.့့့့့့  ၁၆ ၁၅)့့့့့့  ၌့့့့့့့့့့့့  ၌
302. ၂ ၉ ၉)့့့့့့့ ) ၁၆့  )့့့့့့့  )့့့့့ 
303.့့့့့  ၌့့့  ၌့  ၌့့့့့့့့့့  ၃) ၁)့့့့ 
304. ၂)့့့့့့့  ၃)့  ၌့့  ) ၌့့  ) ၁၆ ၉)့့့့့့့့  ၌့  ၌ ၈၁)့့  ၌ ၂၄့့ 
305.့့့့့့့့့့့  ၃ )့့့့့့့့့့့့့့ 
306.့့့့့့့့့့့့့့့့့  ၌့့့့့  ? ?့့့့  ?့့  ၌ )
307. ၁)့့  ၂) ၅) ၃)့့  ၄)့  ၌ ၅)့့့  ၆)့့  ၇) ၈)့့့  ၉) ၁ )့့  ?
308.့  The Christian’s Secret ofaHappy Life Practical Christian Living Course4Lesson 24့့့  ၈ ၂၈) ၅ ၇)့့့့့့့့့  ၌့့့ 
309.့့့  ၁)့့  ၌့့  ၌ ၁၆ ၃၃) ၁၄ ၁)့  ၌့့  ၂ ၃ ၁၂)့့  ၁၄ ၂၂) ၂)့့့့့့့့ 
310.့့့့  ၌့  ၁၃၉ ၁၇) ၃)့  ၌့့့့့့့့့့့  ၈ ၂၉)့့့့့့  ၌့့့့့ 
311.့  ၌့့့့  ၁) ၌့့ ၌၄့ ၌၄ ၄ ၃၅)့့ ၌ ၁၃၅ ၆)့့  ၁၁၉ ၌့့ 
312.့  ၌့့  ၁၁၉ ၈၉-၉၁) )့  ၌ ဃ့့  ၁၄၈ ၇-၈) ၌့  ၌ ၂၁ ၁)့့့  ၂)
313.့့့့့့့့့  ၁ ၆ ၁) rairie Bi le Institute L Ma ell့့  ၌့့့  ၂) ၁) Charles Rent ၌့့  Charles့့  Charles့့့ 
314. Charles့့့  ၌့့့့့ )့  Charles့  ၌ iano့့ ) ၌့့  Charles့့့ 
315.့  Charles ၌ Charles့့့  ၃)့့့့့့့့  ၌့့  ၁၈ ၃ )့့့့့့့့ 
316.့့့့့့့့  ၌့့့့့့့့  ၄)့့့  eelings) Desires) ၌့  ၌့  WILL)့ )့  WILL)့့့့  WILL)့့  WILL)့  WILL)့ 
317.့့  WILL)့့့့့့့့့့  ၌့့့့  ၅)့  ၌့့့  ၌့့  ၌့့့့့  ၈ ၂၈)့့့ 
318.့့့့့့့  ၆)့့့့့့့့  ၌့့  ၌ ၃ ၃)့့့့့့ 
319.့့့့့့့့့  ၌့့့  ၅ ၂ ) ၇)့့့ ၌့့့့ ၌ ၌့့  ၁ ၅ ၁၈)့ 
320.့့့ ၌့့့့့့့  ၌့့့့့ ၌့့့့့့့့့့ 
321. ၌့့့  ၌့့့့့့့့့့့့  ၌ Watchman ee)့  ၇ ၃၇)့့့့ ၌ )
322. ၁) ၌့  ၂) ၌့့  ၃) ၄)့  ၌့  ၅)့့့ ၌ ၆)့  ၌့  ၌ ၇)့့  ၈)့  ၉)့့  ၁ )